Updates software – Windows – Page 19 – Vessoft
Updates software – Windows – Page 19
Codecs Isofthiwe ukubuka idatha mayelana codecs nokuhlunga nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe uhlelo lwakho for ebukhoneni codecs yisikhathi futhi inikeza thwebula enguqulweni yakamuva for update yabo.
English, Українська, Français, Español... Pale Moon 26.1.1 Stable futhi Portable
-Internet Isiphequluli kuhloswe nesanda ngesivinini kanye operation esitebeleni on the internet. Isofthiwe kuvumelana izilungiselelo kakhulu kanye nezandiso of Firefox.
Hambayo Isofthiwe ukubuka kanye nokulawula idatha kwi on amafoni Sony Ericsson kanye namadivayisi isekelwe ohlelweni lwakwa-Android.
English, Afrikaans, Українська, Français... MiniTool Power Data Recovery 7
MyChat 5.17.0.3 Standard futhi Portable
Chat Ingxoxo ekahle futhi Amatebhe ukuxhumana on inethiwekhi wendawo noma internet. Isofthiwe inikeza ezingeni eliphezulu of ukuvikelwa ukuze avimbele ukuvuza idatha.
English, Español, Português, العربية... Mp3DirectCut 2.22
Українська, Français, Español, Deutsch... NetCut 2.1.4
Antiviruses I unqulo wesi arab eziyinkimbinkimbi ezingeni elifanele sesivikelo yakhelwe for ekubhekaneni amagciwane zanamuhla kanye nezinhlobo ezahlukene internet izinsongo.
Akwazi ukugcina Ithuluzi elinamandla ukusebenza nge izithombe disk. Isofthiwe ikuvumela ukuba adale izindilinga eziyizicaba oqalisekayo futhi flash oshayelayo ukufaka uhlelo lokusebenza.
English, Українська, Español, Português... Bona software xaxa
Skype 7.32.73.104 futhi 7.33.73.104 beta